ओली थाइल्याण्ड गएपछि नेपाल बंगलादेश पुगे, भ्रमण रहस्यमय !
काठमाढौं, पुस २८ । स्वास्थ्य उपचारका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थाइल्याण्ड गएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुरमा नेपाल बंगलादेश गएका छन् । आफूनिकटका नेतासँगै केही कार्यकर्ता लिएर बंगलदेश गएका नेपालको भ्रमणलाई राजनीतिक बृत्तमा निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
मिडियालाई जानकारी नदिई सुटुक्क बंगलदेश पुगेका नेपालले केही महत्वपूर्ण भेट गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार केही अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेञ्सीका एजेण्टहरु पनि बंगलदेश पुगेका छन् । नेपालले भ्रमणका क्रममा ती एजेण्टहरुसँग भेट्ने शंका गरिएको छ ।
ओली र नेपाल दुबै जना स्वदेश फर्किएपछि राजनीतिक कार्से बदलिने त होइन ? भन्ने शंका गर्न थालेका छन् । कतिपयले भने राजनीतिको अहिलेकै कार्स द्रुत गतिमा अघि बढ्ने आँकलन पनि गरेका छन् ।